Barnaamijyada Kala-saarida Website-ka Qaybeed ee Ganacsigaaga Marka loo eego Sempt
Haddii aad tahay inaad isticmaasho xogta ganacsigaaga, cilmi baarista ama shaqada, ma jirto wax ka xun intii la sugayay bogagga si ay u buuxiyaan Netscape Navigator ama Internet Explorer. Markaad surfing internetka, waxaa laga yaabaa inaad la kulanto dhibaatada xiriirka gaabis oo laga yaabo inay waayaan xogta aad u baahan tahay. Haddii aad ku aragto bogga culus ama blog oo leh kumanaan bog, waxaad ku riixi kartaa mawjadahaaga dhowr jeer si aad u hesho boggaga si haboon. Nasiib wanaag, barnaamijyada wax soo saarka khaaska ah ee internetka ayaa kuu fududeynaya inaad ku rarayso goobaha aad jeceshahay iyada oo aan wax dhibaato ah - 65 h25 dual. Dareemaha shabakadu waa dhab ahaan barnaamij gaar ah oo caawiya cilmi-baarayaasha, wariyeyaasha, ardayda, ganacsatada, iyo ganacsatada si sahlan u soo saara macluumaadka oo eegaan bogagga internetka oo leh xawaare sare. Qaar ka mid ah aaladaha ugu kalsoon ee lagu kalsoon yahay halkan ayaa lagu sharaxay.
SurfOffline waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee ugu caansan internetka internetka. Qalabkan, waxaad go'aansan kartaa inta xubnood ee aad jeclaan lahayd in aad soo dejiso, mana jiraan wax xadidan tirada bogagga laga soo saaro. Sidoo kale, uma baahnid FTP kaaga website-ka si aad u soo dejiso xogta. Qalabkani wuxuu ku waafaqsan yahay Windows, Vista, XP iyo nidaamyada hawlgalka ee la midka ah.
2. Websaytka Ehtractor:
Waa mid ka mid ah barnaamijyada soo dejinta ee ugu caansan oo caansan. Website eXtractor wuxuu u fiican yahay barnaamijka iyo kuwa aan barnaamijka ahaynba oo ka dhigaya cilmi baaris online ah sahlan oo dhakhso ah. Waxaad ka soo dejisan kartaa bogga intarnetka ama qeybo ka mid ah adoo isticmaalaya qalabkan xooggan..Waxaa loo yaqaan 'interface-user interface' iyo guddiga xakamaynta kaas oo kaa caawinaya qaabdhismeedka iyo abaabulo macluumaad kasta si habboon. Website eXtractor wuxuu ku waafaqsan yahay dhammaan noocyada Windows iyo qalabka iPhone.
Sitesucker badanaa waa barnaamij Mac ah oo kaa caawinaya soo dejinta websiteka oo wuxuu keenaa isbeddel xagga xiriirintaada internetka ah. Waxay si sahlan u daabacan kartaa bogagga loo baahan yahay, sawirrada, qaababka muuqaalka iyo PDFs ku saabsan dariiqa adag ee isticmaalka offline. Waxaad ubaahan tahay inaad gashid URL-ka ah shabakadda SiteSucker, waxayna si toos ah u soo dejin doontaa xogta la rabo. Barnaamijkani wuxuu u baahan yahay Mac OS X 10.11 waxaana laga soo dejisan karaa website-ka SiteSucker.
Goob-a-Site waa mid ka mid ah kuwa ugu awoodda badan oo dhameystiran qalab saarista shabakadda s. Waxay ka shaqeysaa shabakada internetka iyo online-ka waxayna abuuri kartaa nuqulo website ah dhowr jeer, oo ay weheliyaan faylasha taageeraya sida sawirrada, bogagga, faylasha codka, iyo fiidiyoowga. Qalabkani wuxuu sidoo kale ka qaadi karaa faylasha laga helo goobo kala duwan oo isku mar ah, waqti badan iyo tamar badan. Waxay ku habboon tahay ASP, PHP, Cold Fusion iyo JR luqadaha waxayna u rogi karaan HTML-ga caadiga ah. Barnaamijka lacag la'aanta ah wuxuu ka shaqeeyaa Windows 7, Vista, XP, Windows Me, iyo Win98.
Shabakada ugu dambeysa ee Blue Squirrel waxaa loo yaqaan 'WebWhacker' 5. Waxaa laga yaabaa in bogga oo dhan lagu daabaco diskoogaaga adag ee loogu talagalay dadka isticmaala macaamiisha iyo u adeega tababarka goobta barayaasha iyo ardayda. Waa sahlan tahay in la sameeyo oo si joogta ah ula socdo xogtaada tayada, qabanqaabiso iyo u cusbooneysiiso sida shuruudahaaga. Intaa waxaa dheer, WebWhacker wuxuu ku duubi karaa dhismaha tusmada ee goobtaada wuxuuna ku haboon yahay Vista, XP iyo Windows 7.